Fianarana any Alemana Fampianarana vatsim-bola feno 2021 Fampiharana fangatahana vavahady: Vaovao an-tsekoly amin'izao fotoana izao
Fianarana any Alemana Famatsiam-bola feno 2021 Application Formal Portal
Fianarana any Alemana vatsim-bola feno vatsim-pianarana: Any Allemana dia natao mora ny fanabeazana. Misy vatsim-pianarana ahafahana manao izany. Ary koa, ny sasany amin'ireo vatsim-pianarana ireo dia miaraka amina fonosana mahavariana.
Na izany aza, raha te hahalala bebe kokoa momba ireo ianao vatsim-pianarana, tandremo ny fampahalalana ato amin'ity lahatsoratra ity. Amin'ity lahatsoratra ity dia hianaranao ny toerana / ny fomba fangatahana ireo vatsim-pianarana ireo.
Fianarana mahatalanjona any Alemana Fampianarana vatsim-pianarana feno ho an'ny 2021
Ireto manaraka ireto ny sasany amin'ireo Fianarana any Alemana vatsim-pianarana feno:
1. Scholarships DAAD any Alemana ho amin'ny Courses nahazoana alalana amin'ny fampandrosoana
Ity dia iray amin'ireo fandinihana any Alemana izay nahazo famatsiam-bola feno manam-pahaizana. Ary koa, manarona ny diplaoma Masters sy PhD. Ary nomen'ny Service Academic Exchange Service (DAAD).
Ankoatr'izay, manolotra tombontsoa lehibe ho an'ireo nahazo diplaoma avy amin'ny firenena fampandrosoana sy firenena vao vita. Ary koa, manarona ny fifehezana rehetra izany. Ary manampy ny vahiny izany nahazo diplaoma maka diplaoma na Diplaoma maîtrise amin'ny fanjakana na eken'ny fanjakana Oniversite alemana.
Ary, amin'ny tranga miavaka, manampy azy ireo handray a diplaomatika. Ary hahazoana mari-pahaizana oniversite (Master's / PhD) any Alemana. Na izany aza, mikendry tanora matihanina avy any amin'ny firenena an-dalam-pandrosoana izy io.
Award vola: Ny vatsim-pianarana dia misy fandoavam-bola 850 euro isam-bolana ho an'ireo nahazo diplaoma. Ary 1,200 XNUMX Euros ho an'ny mpilatsaka hofidiana dokotera.
fepetra: Ny mpangataka dia tokony hiasa amin'ny raharaham-panjakana na fanjakana na orinasa tsy miankina amin'ny firenena an-dàlam-pandrosoana. Ary koa, tsy maintsy manana mari-pahaizana licence. Ary tsy maintsy nahavita ny mari-pahaizana akademika ambony lavitra noho ny valiny antonony. Ankoatr'izay, ny diplaomany akademika dia tsy tokony ho mihoatra ny 6 taona.
Fe-potoana: Aogositra-Oktobra, 2021.
fampiharana: KITIHO ETO
2. KAAD vatsim-pianarana any Alemana ho an'ny firenena an-dalam-pandrosoana
Ny vatsim-pianarana KAAD dia natokana ho an'ny mpianatra nahazo diplaoma. Ary koa, izy ireo dia mankany amin'ny akademia efa nahazo traikefa matihanina. Ary ho an'ireo izay liana amin'ny fianarana ambaratonga faharoa any Alemana.
Zava-dehibe ihany koa ny manamarika fa ireo vatsim-pianarana ireo dia mikendry ny olom-pirenena any amin'ny firenena an-dalam-pandrosoana voafantina na any an-toerana. Ary koa ireo any Azia, Moyen Orient na Amerika Latina. Na izany aza, misy ny safidin'ny mpangataka katolika. Na izany aza, azonao atao ny mitsidika ny rohy etsy ambany raha mila fanazavana fanampiny.
Award vola: Tsy voalaza. Na izany aza, azonao atao ny mampihatra rohy eto ambany raha mila fanazavana.
fepetra: Ireo mpangataka ho an'ny Master-vatsim-pianarana dia tokony ho amin'ny taona farafahakeliny 30. Raha ny mpangataka PhD-vatsim-pianarana dia tsy tokony ho antitra 35. Ary koa, ny mpangataka dia tsy maintsy avy amin'ny firenena an-dàlam-pandrosoana na any Afrika, Azia, Afovoany Atsinanana na Amerika Latina. Ary tsy maintsy manana mari-pahaizana oniversite.
Fe-potoana:15 Janoary / 30 Jona isan-taona.
3. Finduddannelse.dk vatsim-pandrosoana maharitra
Ity dia vatsim-pianarana omena Finduddannelse DK. Ity koa dia iray amin'ny fianarana any Alemana vatsim-pianarana feno. Ao amin'ny finduddannelse.dk dia mino fa ny mpianatra ankehitriny, amin'ny alàlan'ny fikarohana sy ny fametrahana asa ho avy dia afaka manampy amin'ny famolavolana ny tontolon'ny ampitso amin'ny fomba tsara.
Noho izany, ilaina ny fanomezana vatsim-pianarana hatramin'ny € 5000. Ary ny fanampiana ny saram-pianarana ary hampanakaiky ilay mpianatra, antenaina hoe fiovana manerantany.
Ary koa, ny vatsim-pianarana dia homena ho an'ny semester / fararano 2021. Ary misokatra ho an'ny olona na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao izay te-hianatra master's program izany dia manampy amin'ny fampandrosoana maharitra izao tontolo izao.
Award vola: € 5000.
fepetra: Ny mpangataka dia tsy maintsy nametraka (na hampihatra) amin'ny programa master izay afaka manampy azy hanao izao tontolo izao maharitra. Ary koa, tokony ho nangataka (na hampihatra) amin'ny fianarana manomboka amin'ny Fall Semester 2021. Mihazona mari-pahaizana bakalorea manan-kery.
Fe-potoana: 12 Aprily, 2021.
4. Vatsim-pianarana fanadinana IELTS
Ny fanamarinana IELTS dia mety hanokatra varavarana misimisy kokoa ho an'ireo mpianatra iraisam-pirenena amin'ny akademia. Ary koa amin'ny fananganana asa.
Ankoatr'izay, amin'ny tombatombana, mpianatra manodidina ny 5 tapitrisa no tonga amin'ny fanadinana IELTS avy amin'ny firenena 140 isan-taona.
Na dia misy mpianatra manan-talenta maro aza manana ny fikajiana ny fanadinana IELTS amin'ny naoty tsara, mariho. Saingy, noho ny krizy ara-bola ireo mpianatra ireo dia nilavo lefona tamin'ny fanadinana IELTS. Noho izany, io vatsim-pianarana io dia tsy maintsy ilaina satria manohana ny saran-dalan'ny IELTS.
Award vola: Tsy voalaza.
fepetra: Ny mpangataka dia tokony latsaky ny 32 taona. Ary koa, tsy maintsy nanadio ny High School miaraka amin'ny marika 75% farafaharatsiny. Ankoatr'izay, tsy maintsy nesorinao ny taranja undergrad ambany indrindra 3.0 GPA. Na izany aza, azonao atao ny misimisy kokoa momba ny rohy fampiharana eto ambany.
Fe-potoana: 30 Aogositra 2021.
5. 2021 Vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra ho an'ny mpianatra ambaratonga voalohany
Averina indray, ity dia iray amin'ny fianarana any Alemana vatsim-pianarana feno. Ankoatr'izay, ity vatsim-pianarana ity dia manolotra ny mpianatra mendrika hahazo ny iray amin'ny vatsim-pianarana $ 500 - $ 1500.
Na izany aza, izany dia ezaka hanampiana ny vidin'ny fanabeazana mitohy. Ho fanampin'izay, azonao atao ny mahazo antsipiriany bebe kokoa amin'ny rohy fampiharana etsy ambany.
Award vola: Minimum 500 $.
fepetra: Ny mpangataka dia tsy maintsy mpianatry ny lisea. Ary koa, na mpianatry ny oniversite, ao anatin'izany ny mpifaninana bakalorea sy ny mpifaninana.
Fe-potoana: 30 Oktobra, 2021.
6. Ny vatsim-pianarana Katoni - Manohana tetikasa ara-kolotsaina
Averina indray, ity dia iray amin'ny fianarana any Alemana vatsim-pianarana feno. Ary i Katoni no manome azy. Ary koa, omena isan-taona ny olona iray na maromaro izay mila fanampiana ara-bola amin'ny fianarany, ny asany na ny asany ao anatin'ny faritra ara-kolontsaina.
Ankoatr'izay, ny tanjon'ny vatsim-pianarana dia ny hanohana ireo Danes sy teratany vahiny miasa manokana hanamafisana ny kolontsaina any Danemarka sy ny sisin-tany rehetra.
Ho fanampin'izany, omena ny mpikaroka izy io. Ary ireo mpianatra manerantany. Ny kolontsaina dia misy, fa tsy ferana amin'ny, fifandraisana, fiteny, lamaody, zavakanto, fomban-drazana sns.
Award vola: $10,000
fepetra: Ny mpangataka dia tsy maintsy mpikaroka. Ary koa, dia tokony ho mpianatra sy mpianatra taloha amin'ny andrim-pampianarana.
Fe-potoana: 1 Mey, 2021.
7. Fanolorana vatsim-pianarana fifaninanana 2021
Ary ity koa dia iray amin'ny fianarana any Alemana vatsim-pianarana feno. Ary ny iray amin'ireo tanjona dia ny handrisika ny mpianatra hanatsara ny fahaizany manoratra sy manao fanazaran-tena amin'ny fanaovana taratasy mahomby.
Araka izany, amin'ny maha mpianatra anao dia azonao atao ny manaiky fanamby ary mandray anjara amin'ny fifaninanana famoahana vatsim-pianarana. Hisy mpandresy telo. Ary hahazo loka telo ireo mpandresy telo.
Ankoatr'izay, ny taratasy tsara indrindra dia havoaka ao amin'ny tranonkalan'ny vatsim-pianarana. Ary amin'ny media sosialy. Na izany aza, izany dia raha manome alalana ny mpanoratra.
Award vola: $2,000
fepetra: Ny mpangataka dia tsy maintsy manana diplaoma na undergraduate. Ary koa, tsy misy fetrany ny taona, ny firazanana, na ny miralenta. Na izany aza, aza misalasala mitsidika rohy fampiharana eto ambany raha mila fanazavana fanampiny.
Fe-potoana: 31 Mey, 2021.
8. Vatsim-pianarana ho an'ireo kandidà tsara indrindra - Oniversite Kozminski
Ity vatsim-pianarana ity dia natokana ho an'ny mpilatsaka hofidina rehetra izay mihatra amin'ny fandaharam-pianarana Bachelor na Master an'ny Kozminski University. Ary koa, vatsim-pianarana avy amin'ny Oniversite Kozminski.
Averina indray, io dia iray amin'ny fianarana any Alemana vatsim-pianarana feno. Na izany aza, raha mila fanazavana fanampiny momba ity vatsim-pianarana ity dia tsidiho ny rohy fampiharana etsy ambany.
Award vola: 56% amin'ny saram-pianarana semester - Mitovy amin'ny 7500 PLN.
fepetra: Tsidiho ny rohy fampiharana eto ambany raha mila an'ity vaovao ity.
Fe-potoana: 15 Jolay 2021.
9. Ny vatsim-pianarana MBA amin'ny fotoana feno Manchester
Isan-taona ity vatsim-pianarana ity dia manohana ireo mpifaninana MBA manan-talenta indrindra. Ary koa, ahafahan'ny mpangataka talenta indrindra manararaotra misitraka ny traikefa an'ny Manchester MBA.
Avereno indray azafady. Izy io dia iray amin'ny fianarana any Alemana vatsim-pianarana feno. Na izany aza, raha mila fanazavana fanampiny momba ity vatsim-pianarana ity dia tsidiho ny rohy fampiharana etsy ambany.
Award vola: 10,000 £ - 44,000 £.
fepetra: Ny mpangataka dia tsy maintsy manana mari-pahaizana ara-pianarana tsara. Ary koa, tsy maintsy manana rakitsoratra matihanina tsara. Ary ny fahaiza-mifampiresaka sy mifampiresaka. Ary koa, tsy maintsy manana soatoavina sy etika matanjaka. Ary ny mety ho lasa mpitarika orinasa na mpandraharaha miavaka ary ho masoivoho ho an'ny sekoly.
Fe-potoana: 1 Jona 2021.
10. Vatsim-pianarana EUSP ho an'ny mpianatra manan-talenta any Eropa
Ny fandaharam-pianarana EUSP dia ho an'ny mpianatra iraisam-pirenena sy an-trano. Ary koa, isan-taona, vondrona mpianatra mpianatra manan-talenta kely manana talenta dia omena vatsim-pianarana ilaina.
Ity dia ao anatin'ny programa EUSP Scholar Program hanohana [fanabeazana ny seranan-tsambo. Ho an'ny ankamaroan'ny loka dia mihevitra ny zava-bitan'ny akademika ihany ny EUSP.
Award vola: € 1000 ka hatramin'ny € 15,000 isan-taona.
fepetra: Ny mpangataka dia tokony ho mpianatra amin'ny fotoana feno. Ary tsy maintsy voasoratra anarana amin'ny andrim-panabeazana eken'ny firenena eropeana. Ary koa, tsy maintsy manana GPA an-tsekoly fara-fahakeliny 3.0.
Fe-potoana: 30 Novambra, 2021.
Ireto voalaza etsy ambony ireto ny sasany amin'ireo mahatalanjona vatsim-pianarana any Alemana. Tsara ny mampihatra. Na izany aza, alohan'ny fampiharana, mariho. Hamarino tsara fa mahafeno ny fepetra takiana ianao.
Ary koa, zava-dehibe ny hanaovanao ireo fepetra ilaina amin'ny fahamatorana ho tena matotra. Izany dia satria, mety ho disqualifié ianao raha tsy miraharaha azy ireo. Ankoatr'izay, aza misalasala mitsidika an'ity pejy web ity raha mila fanavaozam-baovao toy izao. Mirary anao ho tsara vintana
Famaritana fahatokisana hanomezana toky ny fisakaizana sy ny fifandraisana
Fandraisana mpiasa any Iyanu Nigeria ho an'ny 2019/2020 | Fampiharana sy fitakiana fangatahana
Ahoana ny fampiasana totozy amin'ny JAMB CBT Examinations 2021 Vaovao farany
Ny Form of AAU Ekpoma Foundation Form Form of 2016/17 dia mivoaka - aaue.waeup.org/login
Fandraisana mpiasa ho an'ny mari-pahaizana momba ny fiantohana ara-pahasalamana any Kwara 2018 | Misorata anarana izao ho an'ny mpiasa nahazo diplaoma ao amin'ny KW-HIA
Fahombiazan'ny fampitahana ny vaksinin'ny Dna sy ny oocistes mivantana amin'ny aretina vokatry ny fanandramana miaraka amin'ny fihenan'ny Eimeria Tenella eo an-toerana sy Houghton an'ny akoho broiler
Ny fe-potoana fisoratana anarana amin'ny anjerimanontolom-panjakana Taraba 2020/2021
« Fanavaozana ny fampiharana amin'ny Banky Iraisam-pirenena 2021 sy ny fe-potoana ofisialy
17 Fanolorana vatsim-pianarana injeniera feno famatsiam-bola 2021/2022 vaovao farany »
Jolay 2021 Vavaka manome aingam-panahy ho fiarovana an'ireo malala
Ny fanontaniany ohatra WAEC 2021 sy ny Schemes ho an'ny lohahevitra rehetra
Kaduna Teacher Recruitment 2021/2022 Jereo ny Application Application Form Portal farany
Fanofana fiara mora vidy: aiza no hanofana fiara manara-penitra amin'ny tahan'ny takatry ny 2021
Jolay 2021 maniry firavoravoana tratry ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana sy ho an'ny rehetra
Altara Credit Limited Fandraisana momba ny firaketana 2021/2022
Wema Bank Recruitment 2021/2022 Jereo ny vavao fanavaozana ny fampiharana
Formaire Recrementment DSSC Air Force Nizeriana 2021 www.airforce.mil.ng/apply-now
Dashboard fandraisana mpiasa TSB 2021 Hamarino ny toetoetran'ny fampiharana
Jereo ny saram-panazavana Visa ho an'ny firenena rehetra Vaovao farany 2021
Ampiharo izao ho an'ny fandraisana mpiasa an'habakabaka DSSC 2021
Fandraisana mpiasa an'habakabaka NSSC DSSC 2021/2022 Jereo ny Application Form Portal
WAEC GCE Sampana momba ny siansa momba ny fambolena 2021 Jereo ny santionany feno
WAEC GCE Fizarana fizika 2021 Hizaha toetra azo ampiharina feno
Fepetran'ny komisiona mivantana fohy (DSSC) ho an'ny Para-miaramila
Guaranty Trust Bank Recruitment 2021/2022 Application Formal Portal
Wema Bank Plc Recruitment Portal 2021 Tsidiho ny www.wemabank.com
Gtbank Login Portal www.gtbank.com Jereo ny fanavaozana ny fandraisana mpiasa 2021